2019 Fanoloana bateria iPhone vaovao tonga China Manufacturer
Description:Solosaina finday 6s,IPhone Battery fanoloana,2019 Bateri finday vaovao Iphone
Home > Products > Batterie IPhone > IPhone 6 Battery > 2019 Fanoloana bateria iPhone vaovao tonga
Ny batterie iphone 6S dia mampiasa ny amboara IC avo lenta ampidirina amin'ny tombo-kase am-boalohany, avy amin'ny fitahirizana ny sela ka hatramin'ny famoahana, dia mihena amin'ny tsy fahampian'ny tahan'ny fiovam-po taloha teo aloha ny 99% ary manavao tanteraka ny tahan'ny fiovam-po amin'ny 99.9%. Ny Batteran'ny finday finday dia namboarina fuse indroa mba hisorohana ny làlety fohy, miverina amin'ny alàlan'ny fihenan'ny tadio fahatsiarovana.
Amin'ny maha-mpamokatra matihanina mihoatra ny 7 taona niainana, ny teknolojia Hequanqingnuo dia tompon'ny marika HQQNUO izay voarohirohy amin'ny karazan-java- finday samihafa toy ny Batterie , Huawei Battery, batterie Samsung ary ny fitaovana finday finday hafa , toy ny raharaha charger iphone, charger car QI, Ny tariby finday sns
Mety amin'ny: paoma iphone 6S
Fahaiza-manao: 1715 mAh
Volavolan-tena voafetra: 4.35V
Habe: mitovy amin'ny bateria iphone tany am-boalohany
Fotoana fihodinana: in-500 mahery
Fitaovana: polymer cobalt madio
Fotoana fiampangana: 2.5 ora
Fonosana: fonosana boaty fotsy fanondranana entana na namboarina
Fandoavana: L / C, T / T, Western Union, Paypal sns.
Fandefasana: tokony ho 3-7 andro aorian'ny fandoavana
Ady: 12 Volana
MOQ: 100 ny sombiny
Endri-javatra ho an'ny bateria finday iPhone 6S ela
1. Tsisy fahatsiarovana tadidy, vonona ny handoa sy handroaka
Tsy mijaly amin'ny vokatry ny fahatsiarovana izany, tsy hiteraka fahaverezan'ny fahafaham-po rehefa miverina ny bateria tsy maivana tanteraka.
2. Tsy misy fahavoazana, ny fampiasana fitaovana kobalt madio tontolo iainana
Mampiasa fitaovana ara-tsarobidin'ny tontolo fihinana kobalt madio, ireo akora mampidi-doza toy ny firaka, mercury, nickle dia tsy voapetraka.Please mahatsiaro ho maivamaivana momba ny fampiasana.
3. Ny fahafaha-manao feno, ny hery mitovy toa ny fonosana tany am-boalohany
1715 mAh ny fitambaran'ny fahafahana izay mitovy amin'ny tany am-boalohany.100% mifanaraka amin'ny telefaona, azonao antoka fa mandeha tsara.
Shenzhen Hequanqingnuo Electronic Technology Co, Ltd dia mpanamboatra matihanina amin'ny bateria finday efa ho 7 taona.Izany dia manana tranokala hiasa 1000 metatra toradroa misy mpiasa 100 eo ho eo. Rehefa avy nanorina tamin'ny taona 2012 io, dia manatanteraka fomba hentitra maromaro izahay. avy amin'ireo akora mamatsy vokatra.Amba mpamatsy vokatra sy mahatoky isika, dia mahazo miverina be isika amin'ny sehatry ny bateria finday.Rika manana tambajotra mivarotra eran-tany hahazoana laza tsara.
Hequanqingnuo manana rafitra fitantanana kalitao feno sy siantifika ary mifantoka amin'ny fahamendrehana, mijanona amin'ny fifanarahana isika, manome antoka ny kalitao vokatra ary mandray ny foto-kevitry ny marketing momba ny toetran'ny fitantanana isan-karazany sy ny tombom-barotra kely miaraka amin'ny varotra avo.Produks dia nandia RoHS / CE / FCC taratasy fanamarinana. haitao maimaimpoana mitarika, recyclable.Nika hanantitrantitra ny foto-kevitry ny 'Quality Voalohany, fitoviana ary tombontsoa miaraka, fampandrosoana miaraka, ary serivisy "tsara indrindra".
Solosaina finday 6s IPhone Battery fanoloana 2019 Bateri finday vaovao Iphone Solosaina finday finday Solika finday I bateria finday 6s Solosaiko ny bateria finday finday Batterika finday Xs